तपाइँ जान्नुहुन्छ जब तपाईं सुन्दर हुनुहुन्छ ... » Martech Zone
तपाइँ जान्नुहुन्छ जब तपाईं सुन्दर हुनुहुन्छ ...
शनिबार, डिसेम्बर 27, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
तपाईंलाई थाहा छ तपाईं एक सोशल मीडिया हिप्पी (smippy) हुनुहुन्छ, जब:
तपाईं ट्विटर स्वत: प्रतिक्रियाहरू रोक्न याचिका सुरू वा हस्ताक्षर गर्नुहोस्… जसले वास्तवमा ट्विटर स्वत: प्रतिक्रियाहरू रोक्न केहि पनि गर्दैन।
तपाइँ आफ्नो कम्पनी ब्लग को आउटसोर्सिंग ब्लगिंग को आदेश को उल्लंघन हो केहि लाग्छ।
तपाईँ सोच विचार गर्नुहोस् एक सामाजिक कम्पनीले सामाजिक उत्पाद साइटहरूमा एक चरित्र विकास गर्न उनीहरूको उत्पादन बजार गर्न एक असफल रणनीति हो, जब यसले बिक्री र एक्सपोजरमा परिणाम दिन्छ।
तपाईँ सोच विचार गर्नुहोस् ब्लग विज्ञापन, भुक्तान लिंक, वा प्रायोजित पोष्ट रहित हुनु पर्छ र त्यो ब्लगर्सले आफ्नो सबै अनुसन्धान गर्नुपर्दछ र उनीहरूको ब्लग पोष्टहरू हृदयको उदारताबाट अनुग्रहपूर्वक लेख्नु पर्छ।
(टिप्पणीमा जानु भन्दा पहिले यस पोस्टको अन्तिम खण्ड पढ्न नबिर्सनुहोस्!)
मलाई स्मीपिस मन पर्छ, मलाई गलत नबनाऊ। म एक दिन हुन चाहन्छु - मैले पहाडमा केही जमिन किन्नको लागि पर्याप्त पैसा बचाएको छु (स्याटेलाइट ब्रॉडब्यान्डको साथ) र पचौलीको एक जोडी। अब र त्यस बीचको बीचमा मैले बिलहरू तिर्नु पर्छ।
मेरो बिलहरू भुक्तानी हुनेछ जब कम्पनीहरूसँग मिडियाको फाइदा लिनको लागि दूरदर्शिता र साहस हुन्छ जुन विगतमा भन्दा पनि राम्रो ROI र ग्राहक सन्तुष्टिको परिणाम हुन्छ। म तिनीहरूलाई त्यसो गर्न मद्दत गर्दछु, र यसको लागि म माफी माग्दिन।
ट्विटर एक बजार माध्यम को रूपमा
केटा कावासाकी रोबर्ट Scoble लाई बताउनुभयो कि ट्विटर इतिहासको सबैभन्दा ठूलो पीआर उपकरण हुन सक्छ। ट्विटर विकसित हुँदैछ।
भर्खरको अन्तर्वार्ताहरूमा संस्थापक इभान विलियम्सले उल्लेख गरिसकेका छन कि उनी ट्विटरको अवसरलाई सामाजिक मञ्च भन्दा बजारका माध्यमका रूपमा बढी उत्साहित छन्। ट्विटर मा पनि कदम चालेको छ सफलता मा नगद मा। त्यो लिनुहोस् smippies!
ट्विटर हो अनुमति-आधारित मार्केटिंग माध्यम। जस्तै, यो एक प्रदान गर्दछ कम्पनीहरूका लागि उत्तम अवसर तिनीहरूले कसरी प्रभावकारी ठान्छन् आफैलाई बजार गर्न। मार्फत प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाहरूलाई स्वचालित गरेर ट्वीटरलेटर र मेरो ब्लग पोष्टहरूमा स्वतः पोष्ट गर्दै Twitterfeed, मैले मेरो ब्लगमा सदस्यता लिनेहरूको संख्या%% र दैनिक पाठकहरूको संख्या बढाएको छु (ट्विटरबाट प्रत्यक्ष) औसतमा%%।
If तपाईं मलाई पछ्याउन छनौट गर्नुहोस्, तपाईं स्वाभाविक रूपमा मलाई तपाईंसँग कुराकानी गर्न अनुमति प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। जब म असन्तुष्ट नहुनुहोस्। प्रत्येक कम्पनीले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा हो त्यो ह्यान्डशेकमा क्यापिटलाइज गर्नुहोस् र सीधा जवाफ दिनुहोस् केहि राम्रो संग। यदि तपाईंलाई यो मनपर्दैन? अनब्लक! यो सजिलो छ।
Smippies खुशी हुँदै छ, अधिक चिन्ता, सामाजिक मिडिया मार्केटिंग को बारे मा। पपअपहरू र अन्य हस्तक्षेप मार्केटिंग सूर्यास्तमा विलुप्त हुँदैछन्। अन्तमा, कम्पनीहरूले अनुकूलन गरीरहेका छन् र खोज्नका लागि र उपभोक्ता भएको ठाउँमा जडान गर्न खोजिरहेका छन् - उपभोक्तालाई लात हान्दै र तिनीहरूलाई चिच्याएर होइन।
खोज इञ्जिन मार्केटिंग यसको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो। कर्पोरेट ब्लगि companies कम्पनीहरूका लागि अत्यावश्यक व्यायाम भइरहेको छ, किनकि यो दुबै धारणा र अधिग्रहणको एक उत्कृष्ट साधन हो। उपभोक्ताहरू खोज ईन्जिनमा छन् - त्यहि हो जहाँ कम्पनीहरू हुन आवश्यक छ!
जब कम्पनीहरूले हड्ताल गर्छन्!
त्यसोभए तपाईले सबै कुरा पढ्नु भएको छ र तपाईले सोच्नु पर्छ म केही ठूला 'ओएल पूंजीवादी सुँगुर हुँ जसले कम्पनीहरूलाई प्रत्येक माध्यम प्रयोग गर्न सल्लाह दिदैँ हेरफेर गर्न, हेरफेर गर्न, हेरफेर गर्न, बेच्न, बेच्न।
सामाजिक मिडिया को बारे मा रमाईलो कुरा यो हो कि यो अन्ततः खेल मैदान सन्तुलित छ। कम्पनीहरू जसले माध्यम दुरुपयोग गर्ने प्रयास गर्छन् असफल मात्र हुने छैनन्, तिनीहरू लज्जित हुनेछन्। ट्विटर, ब्लगिंग र सोशल मीडियाको हेरफेर र दुरुपयोग दर्दनाक र छिटो जरिवानाको साथ भेटिन्छ ... यदि सबै प्रकोप बाहिर छैन भने।
त्यो सबैका लागि राम्रो छ! Smippies समावेश
Interspire प्रेरणादायक परिष्कृत ईमेल मार्केटिंग
ब्लग ब्लोक - तपाईलाई राम्रो ब्लगर बन्न मद्दत गर्दै
डिसे 27, 2008 मा 9: 02 AM
हम्म .. मलाई धेरै धेरै पहिले थाहा छैन जब कावासाकी केवल एक नौसिखिया ब्लगर थिए र सुझाव दियो कि यो स्पाममा ठीक थियो। ठिकै मैले उसलाई थोरै मौखिक स्पानकि give दिनुपर्‍यो र डेभ विनर पनि मसँग सहमत भए। 🙂
जे भए पनि, मेरी क्रिसमस डौगी। एक राम्रो एक छ र तपाईंको परिवार को लागी सबै उत्तम हो!
डिसेम्बर १, २०१ 27 2008:२:12 अपराह्न
हे ब्लोक! तपाईं क्रिसमस पनि आनन्दित।
स्पाम अनुमति-आधारित मार्केटिंग होईन, यद्यपि!
डिसेम्बर १, २०१ 27 2008:२:3 अपराह्न
यो पोष्ट मनपर्‍यो! यो वास्तवमा मलाई LOL बनायो।
मैले जवाफ दिन शुरू गर्दा, यसले मलाई अलि बढी सोच्यो, त्यसैले मैले वास्तवमै मेरो ब्लगमा प्रतिक्रिया पोष्ट गरें: http://www.afhill.com/blog। त्यहाँ निश्चित रूपमा बाहिर smippies छन्, र सम्भवतः सधैं हुनेछ। तर हामीमध्ये धेरैले स्मुलेट हुन चाहना गर्नु पर्छ - जसले सामाजिक मिडियाको दुबै पक्षलाई पहिचान गर्दछन्: व्यक्तिगत र व्यावसायिकको रूपमा।
डिसेम्बर १, २०१ 28 2008:२:4 अपराह्न
वास्तवमा तपाईंको पोस्टको बारेमा उनको पोष्टबाट यहाँ Andrea लाई पछ्याए (र मलाई लाग्छ कि म यसलाई सन्दर्भित पनि गर्नेछु)।
निश्चित रूपमा मलाई (र हाम्रो नेटवर्क) स्म्पी भीडबाट गणना गर्नुहोस्। जहाँसम्म, तपाईंको पोष्टले प्रदर्शन गर्दछ, बौद्धिक रूपमा ब्लगि as गर्दै र वास्तविक मानवको रूपमा दुबै स्मिप्पी र “स्मुलेट्स” (एन्ड्रियाको प्रशंसा) कोटीहरूमा राख्दछ 🙂
ब्लगिंग निश्चित रूपले "स्वचालित" हो एक पटक तपाईले इनपुट गरिरहनु भएको भए (हातैले) जुन तपाईं कल्पना गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ कि ब्लगहरू जसले मलाई अलि बौलाहा बनाउँदछ जुन त्यहाँ मानव हातले सामना गर्नु पर्‍यो किनभने यो स्थापित भइरहेको थियो।
तपाईं फरक बताउन सक्नुहुन्छ 🙂
अचम्मको कुरा, ट्विटर मेरो लागि आज एक गहन विषय हो जस्तो देखिन्छ - दुबै ईमेल र पोष्टहरूमा। हामीले यसलाई पहिले पनि कभर गरिसकेका छौं, र प्रयोग गर्नुहोस्, तर यो नयाँ शब्द सिकेजस्तै हो ... त्यहाँ पप अप गर्ने कारणहरू सधैं हुन्छन् (त्यसैले ट्विटरको एक रिफ्रेसर क्रमबद्ध छ, वा त्यसैले ब्रह्माण्डले मलाई बताइरहेको छ)।
ओह, र btw, एक उपग्रह जडान संग पहाडहरूमा रिट्रीट मलाई पनि ठूलो लाग्यो!
डिसे 29, 2008 मा 1: 08 AM
स्मीप्पी, स्मुलेट्स ... यसले मलाई हाँस्न बनाउँछ! तपाईं कसरी smippies कज्जित हुनेछ को बारे मा एक धेरै राम्रो बिन्दु बनाउछ कि म सुन्न सबै छ… .. थिम बाहेक सबै कुरा हटाउनुहोस्। यदि तपाईं ट्युनरबाट ट्राफिक चाहनुहुन्छ भने, तपाईंसँग राम्रोसँग केही घण्टीहरू र सीटीहरू छन् तिनीहरूलाई ब्लगमा हेर्नको लागि।
जे भए पनि, म पाइनको जंगलमा छु, यसलाई मनपर्दछ, तर अझै भुक्तानी गर्न बिलहरू छन्। 🙁
डिसेम्बर १, २०१ 29 2008:२:4 अपराह्न
महान पोष्ट डग, एक SMIPPY! यो मलाई मन पर्छ।
टेक्नोलोजी तपाईको लागि काम गर्नु हो। यसलाई काम गरिरहनुहोस्!
मलाई एक कुराकानी-उत्तेजक पोष्ट भर आउन मनपर्छ जुन मैले छुटेकी छु। डग, म पारदर्शिता तपाईं आफ्नो पहिले अनुभव मा प्रस्ताव को कदर गर्छु। यसले तपाईंको विश्वसनीयतामा तहहरू थप्छ र मान्छेहरू (म जस्तो) मूर्त र प्रासंगिक anecdotes दिन्छ।
अब मसँगै हतार गर्नुहोस् र स्मीप्पीलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ ताकि म यसलाई मेरो दीर्घकालीन सामाजिक मिडिया शब्दावलीमा प्रतिबद्ध बनाउनेछु। 🙂